Displaying items by tag: aqalka sare
'' Gudoomiyaha Golaha Aqalka sare iyo Wakiilada Qaramada Midoobe iyo Midowgga Afrika u qaabilsan Soomaaliya waxay ka wada hadleeen sidii loo dajin lahaa xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya,sidii shaqada Aqalka Sare uu haayo loo taageeri lahaa iyo sidii xal waara loogu heli lahaa khilaafka taagan,sidoo kale gudoomiyaha Aqalka Sare ayaa warbixin ka siiyay shaqada Aqalka sare sare uu soo qabtay''.
Kulamo uu laqatay Qaybaha Kala duwan ee Bulshada ayuu Wafdigii Aqalka Sare ee Galmudug u tagay xalinta khilaafaadka
Guddigii loo diray Galmudug ayaa Kulamo La qaatay Shaleey Qaybaha Kala duwan ee Bulshada Ku dhaqan Dowlad Goboleedka Galmudug Si wax looga wareesto Baahiyaha ay qabaan iyo Fikirkooda ku aadan khaliaafyada Guddaha ah iyo Kuwa Dowlad Goboleedyada.
Magalada Baydhbo waxa uu gudigi kasocday Golaha Aqalka Sare Baarlamaanka Federaalka Somaliy uu la yeshay madaxda mamulka koonfur galbeed
Magalada Baydhbo waxa uu gudigi kasocday Golaha Aqalka Sare Baarlamaanka Federaalka Somaliy uu la yeshay madaxda mamulka koonfur galbeed ayadoo ay la kulmeen
Kusimaha Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo qaar kamid ah wasiiro ka tirsan mamuulka Koofur Galbeed Soomaliya.
Sidoo kale manta waxay kulan la qaateen odayasha dhaqanka deeganka doowlad goboleedka Koonfur galbeed Soomaaliya .
Kulamadaan ayaa qeeyb ka ahaa kulmo isxogwareeysi ah oo uu wafdigu layeelnayay qeeybaha kala gadisan ee bulshada.Kulamadaan ayaa isafgarad ku idlaaday.